Wax badan oo ku saabsan werwer ku saabsan gudbinta Spam! Khabiirka Cimilada wuxuu yaqaanaa sida looga saaro Google Analytics
Isticmaal kasta oo internetka ah, spam waa arrin caadi ah oo soo bandhigaysa arrin khatar ah oo ku saabsan adigabogga. Tusaale ahaan, dad badan ayaa ka hela emayl laga soo diro kuwa aan la garanayn, kuwaas oo intooda badan ka danbeeya weerarka internetka. Dhibaatadu way sii xumaaneysaa markaSpammarahaan waxay bartilmaameedsanayaan dadka leh bogagga internetka - free scratch tickets real money. Xaaladaha intooda badan, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto spam gudbinta ah, halkaas oo aad la kulantid qaar ka mid ah gaadiidka wadnahalaga soo bilaabo meelaha la isku hallayn karo. Gawaarida khatarta ah ee ka imaanaya spam gudbinta ma beddelaan waxayna keenaysaa in si deg deg ah loo ogaado. Spammerswaxay leeyihiin qalab casri ah iyo sidoo kale xirfado SEO ku filan si ay u helaan ujeedooyinkooda saxda ah.
Google Analytics ayaa calaamad u ah gaadiidka sida been abuur ah sida ugu dhakhsaha badan ama xadka aad isdhex gashan tahayoo leh bog bogga. Spammers waxay awood u leeyihiin inay sameeyaan joogitaanka internetka ee been abuurka ah, taas oo ka dhigi karta mid aan kala sooc lahayn oo ka yimaada gaadiidka dhabta ah.Waxay samayn karaan muuqaalka bogga been abuurka ah, dhiirrigelinta been abuurka, dhacdooyinka, macluumaadka macaamil ganacsi iyo sidoo kale joogitaanka warbaahinta bulshada been abuur ah. Inta badan kuwaanspams waxay ku dhacaan bogga Google Analytics iyadoo magaca martida ay maqan tahay si ay mar walba u beddelaan mid cusub.
Michael Brown, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah, waxay siiyaan fikrado ku saabsan sida loola dagaallamo spam gudbinta iyo baabuurta been abuurka ah.
Xeeladaha ugu firfircoon spam ee bartilmaameedka shabakada internetka waxay helayaan gaadiid badan iyo sidoo kale sameyntagoobta ayaa kordhinaysa tirada aragtiyada..Natiijadu, dadku waxay ka faa'iideysan karaan gaadiidkan been abuurka ah. Tusaale ahaan, bogagga intarnetka badanwaxay u baahanyihiin gawaarida Saameyntani waxay ka dhigi kartaa macaamiisha mustaqbalka inay tixgeliyaan iibsashada bogga internetka iyagoo leh aragtiyo badan amamacaamiisha. Intaas waxaa sii dheer, taraafikadu waxay keenaysaa dareen ah kalsoonida, wadnaha samaynta isbeddel online ah.
Qaar ka mid ah talooyin si looga fogaado spam u gudbinta
Dhibaatooyinka waa software-yada oo ah mid sax ah oo degdeg ah oo sameynta hawlaha dib-u-celintawebka. Waxay samayn karaan hawlo isdaba-joog ah oo website-ka ah sida dadka. Si kale haddii loo dhigo, bots waa robot yaryar oo wax ka qaban karahawlaha wanaagsan sida indexing content content o ood raadinta. Si kastaba ha ahaatee, khaniisiinta ayaa wali isticmaalaya kuwan xagasha ah si ay u fuliyaan rabitaankooda jirran sida:
Faallooyin iyo fikrado qoraya
Xogta waraaqaha laga soo qaato bogga
Abuurista xisaabaadka qarsoon ee user
Khiyaamada waxay jecel yihiin inay sameeyaan sumcadda goobta tartanka tartanka
Waa in aad isticmaashid filtarrada boodhka leh ee sare si aad kuwan uga fogaysid magacaaga isticmaale. Qaar ka mid ahkiisaska, isticmaalayaashu waxay awoodaan in ay galaan guddi maamulkooda iyo sidoo kale qaybo kale oo nugul oo shabakad. Waxa kale oo muhiim ah in aad dareentid dareenkaagamacaamiisha qaar ka mid ah weerarrada spam gudbinta caadiga ah. Waxaad ka badbaadin kartaa saameyno badan oo waxyeelo leh oo spammers guuleysta ay isticmaali karaan si ay u guuleystaan.
Waxaa jira dad badan oo internetka ah oo qaba cudurada halista ah kuwaas oo bartilmaameedsanaya ugu yaraanuser user. Dadka leh bogagga, spammers iyo hackers waxay la xiriiri karaan dhibbanaha nugul waxayna xadaan xogta qiimaha leh. GoogleAnalytics waxay awood u yeelan kartaa in la ogaado oo la baabi'iyo qaar ka mid ah kiisaskaas spam gudbinta. Spam waxaa ku jira isku xirnaanta niyadda ujeedasida Trojans iyo fayrusyada ku jira lifaaqyadooda. Qaar ka mid ah waxay ku dhejin karaan guddiga maamulka waxayna xadaan macluumaadka qiimaha leh sida kaarka deynta macmiilkamacluumaadka. Waxaad iska ilaalin kartaa spam adigoo isticmaalaya tusahan. Ammaanka websaydhkaagu wuu adkayn karaa sidoo kale boggaaga nadiif ah oo bilaash ahlaga bilaabo khayaanadaha.